Doom4ရိုက်သံ 2018 - Download Unlimited Doom Hacks & Cheats
နေအိမ် » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Doom4ရိုက်သံ
Doom4ရိုက်သံ
အားဖြင့် အမ်မလီ Kenzie | ဒီဇင်ဘာလ 12, 2017
Unlimited Doom Download4ရိုက်သံ & အခမဲ့ hack
Doom video game isafirst-person shooter game developed by id Software and published by Bethesda Softworks. မေ 13, 2016, Doom ကို Microsoft Windows ပေါ်မှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြန့်ချိခဲ့သည်, PlayStation 4, နှင့် Xbox One မှာ. Doom Crack Tech မှ 6.Players အမည်မသိအဏ္ဏဝါ၏အခန်းကဏ္ဍကိုယူအိုင်ဒီစွမ်းအားဖြင့်နေသည်, ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံထံမှနတ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်နေသည့်. အနာဂတ်-set ကိုကိုလိုနီဂြိုဟ်အင်္ဂါဂြိုဟ်တွင်သောဤတပ်ဖွဲ့များသည်ပြည်ထောင်စုလေကြောင်းကော်ပိုရေးရှင်းတို့ကလွှတ်ခဲ့ကြ. အဆိုပါဂိမ်းကစားသမားများအတွက်ပိုပြီးဖွင့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်အရှိန်အဟုန်ရှိပါတယ်.
ဒီဂိမ်းလည်းပတ်ဝန်းကျင်သွားလာလမ်းကြောင်း features, ဇာတ်ကောင်အဆင့်မြှင့်တင်. ထို့အပြင်, အဖြစ်လူသိများရန်သူများကိုအပေါ်ကွပ်မျက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိ “ဘုန်းအသရေသတ်။” ဒီဂိမ်းကိုခေါ်မယ့်အဆင့်ကိုအယ်ဒီတာ features “SnapMap” နှင့်အွန်လိုင်းမှ multiplayer အစိတ်အပိုင်းထောက်ခံပါတယ်. Doom ဂိမ်း Crack စုဆောင်းလွတ်လပ်စွာဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံးကစားသမားများက switched နှင့်မျှမ Reloaded လိုအပ်နိုင်သည့်လက်နက်များ၏ကြီးမားသောလက်နက်တိုက် features.
ထို့အပြင်, ထိုကဲ့သို့သော Revenant အဖြစ်မူလဂိမ်းထဲကနေရန်သူများကို, Pinky, Mancubus, များစွာသောဒီဇိုင်းရန်သူနှင့်အတူ Cyberdemon ကိုလည်းပြန်လာ. Doom ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလည်းဂိမ်းတစ်ခုထက်ပိုသောအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်အောင်ဖန်ဆင်းထားသည်, ထိုသို့ကျော်ဖွင့် 13 နာရီတာရှည်. ထို့အပြင်, အ “ultra-အိပ်မက်ဆိုး” level features permadeath, အဆိုပါ savegame ကစားသမားသေတစ်ချိန်ကဆုံးရှုံးသွားသောခံရဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ရာ. ဒါဟာ Doom ၏ difficulty.The ကမ်ပိန်းတစ်ခုအဆင့်င်4အပြည့်အဝအက်ကွဲလည်းတပ်ဆင်ထား 13 မြေပုံ.
အဆိုပါ Doom4Crack Status game has such levels which have multiple pathways and open areas. ကစားသမားများအဆင့်တစ်လျှောက်လုံးစုဆောင်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတွေ့ရှိရန်သည်ဤလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်ဒေသများရှိစူးစမ်းလေ့လာလို့ရပါတယ်. ဤရွေ့ကားရှားပါးစုဆောင်း Doom ရဲ့တိုးတက်မှုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. Doom Crack အခြေအနေလက်နက် mods ပါဝင်သည်, Rune အင်အားကြီး, နှင့်ကဲဝတ်စုံအဆင့်မြှင့်တင်. လက်နက်အချက်များကစားသမားအများအပြားလက်နက်များဘို့မီးအခြား Modes သာသော့ဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြု, ထိုကဲ့သို့သောပေါက်ကွဲရိုက်ချက်များနှင့်စွမ်းအား၏ကွဲပြားခြားနားသောနှုန်းသည်နှင့်အထွက်အဖြစ်.
လက်နက်များ’ ပစ်ခတ် Modes သာလက်နက်တိုကင်ကိုအသုံးပြုပြီးအဆင့်မြှင့်နိုင်ပါသည်. ဤရွေ့ကားတိုကင်သာကဆိုသည်ပစ်ခတ် mode ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြည့်ခြင်းဖြင့်ထွက် maxed နိုင်ပါသည်. ထို့အပြင်, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတခါတွေ့ရှိခဲ့, တစ်တိုက်ခိုက်ရေးစိန်ခေါ်မှုဖျော်ဖြေဖို့သီးခြားနယ်ပယ်မှကစားသမားသယ်ယူပို့ဆောင်. ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ကြသောအခါ, ပြန်လာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်ရရှိခဲ့နိုင်ပါသည်. ဤရွေ့ကားစွမ်းရည်ဥပမာပိုကောင်းပစ္စည်းကိရိယာများလဲရန်သူလက်မှကျဆင်းသွားနိုင်ပြီး stuff.Game ကစားသမားအများအပြားသည်အခြားအမျိုးအစားများလည်းသူတို့ရဲ့တစ်ခုအဆင့်မြှင့်စေနိုင်သည် “suite ခဲ့” တိုးမြှင့်ကျန်းမာရေးအားဖြင့်, သံချပ်, သေလွန်သောသူတို့သည်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ထံမှထူးခြားသောတိုကင်ကိုပြန်လည်ရရှိရန်အားဖြင့်လက်နက်ခဲယမ်း.
Doom4အက်ကွဲအခြေအနေအံ့ဖွယ်အင်္ဂါရပ်များရှိထားသည်
It has6mode ကိုကစားသူအများအပြား. (modes Soul ရိတ်သိမ်းဟုခေါ်ကြသည်, အေးခဲ Tag ကို, Warpath, Clan ရဲ့ Arena, လွှမ်းမိုးမှုကို, နှင့်အဖွဲ့ Deathmatch)
တစ်ဦး Doom Snap မြေပုံပါဝင်ပါသည်
Download လုပ်နည်း & Crack Doom42018
Doom ပေးသောခလုတ်ကနေ Download လုပ်ပါ
ဂိမ်း Install, ပြန်လည်စတင်ပါ Device ကို
အဆိုပါ Readme.txt ဖိုင်ထဲတွင်ညွှန်ကြားချက် Crack.
Download Doom4ရိုက်သံ
Metal Gear Solid5ရိုက်သံ
စုစုပေါင်း Warhammer Crack
← GraphiSoft ArchiCAD 21 ရိုက်သံ Wavepad အသံ Editor ကို 7.14 ရိုက်သံ →
တစ်ခုမှာ "ပေါ်တွင်ထင်Doom4ရိုက်သံ”
Jackeline Wallick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2017
Malwarebytes Anti-Malware 3.3.1 ပရီမီယံ Crack